China Onamandla Korea laser ingalo picosecond laser tattoo ukususwa umshini Ukwakha kanye Factory | I-GGLT
Inamandla Korea laser ingalo picosecond laser tattoo ukususwa umshini
Inamandla Korea laser ingalo picosecond laser tattoo ukususwa umshini, ngamandla amakhulu kakhulu ukuze isisindo sombala sivuvuke ngokushesha futhi sihlukane sibe izingcezu ezincane, ezisuswa ngomzimba’s uhlelo lwe-metabolic. Njengoba isikhathi se-laser enjalo sifushane kakhulu, sifushane njengama-trillionths ayishumi ngomzuzwana, akulula ukukhiqiza ukushisa ukuze kungalimazi ezinye izingxenye zesilonda sesikhumba. It’s inketho enhle kakhulu yalolu hlobo lwezinkinga zesikhumba.
I-Picosecond pulse width iphindwe izikhathi eziyi-100 ukushona kobuchwepheshe be-Q Shintsha i-nanosecond, inika amandla umthelela ongenakuqhathaniswa wesithombe esikhumbeni esicacile ngezindlela ezimbalwa zokwelapha, amandla amancane futhi ngaphandle kokulimaza isikhumba esiseduze. I-Picosecond ingaphatha ama-tattoos ochwepheshe, amateur, traumatic and recalcitrant - lawo ma-tattoos ake aphathwa phambilini futhi akhombisa ukumelana nama-lasers ajwayelekile we-nanosecond tattoo.
Uma kukhulunywa ngokwelashwa kwezilonda ezinombala nokuvuselelwa kwesikhumba, ama-laser pulses amafushane kakhulu abhekiswe ezilondeni ezingafuneki. Umbala uhlukaniswa ube yizinhlayiya ezincane kakhulu ezikhishwa kalula ngezinqubo zomzimba zemvelo.
Umshini we-laser we-Picosecond unokusetshenziswa okuyinhloko okuthathu:
2. Ukwelashwa kwezilonda ezinombala, kufaka phakathi amabala elanga nobudala, amachaphazelo, i-cafe au lait marks, i-nevus ye-ota ne-beckers nevus.
3. Ukuvuselelwa kwesikhumba nokuqina.
Ukwakha umthelela omkhulu oshisayo wezithombe kuma-trillionths wesekhondi, ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-Picosecond laser`s, buvikela isikhumba ekulimaleni okushisayo okukhulu futhi bukhomba i-chromophore yokuthola imvume engcono ekwelashweni okumbalwa.
Akukho sibhamu esilinganiselwe, sebenzisa impilo yonke.
2.Isikrini esikhulu, esilula futhi esikahle.
3. Imenyu e-Humanized, elula ukusebenza;
4. Amandla amakhulu enza ukuthi ukwelashwa kwakho kusheshe futhi kuphumelele.
5. Uhlelo lokungenisa umoya oluhle kakhulu nohlelo lokupholisa ukuqinisekisa ukusebenza kwamahora amade.
6. Singaqinisekisa umkhiqizo oyingqayizivele ngoba igobolondo likhiqizwa sisodwa.
Ingalo engu-7 yokuhlanganisa i-laser evela eKorea,
amandla wokudlulisa, Ngaphezu kwama-95%
I-semiconductor ebomvu ehlose ukukhanya
10.4” umbala touch LCD isibonisi
Q1. Unasiphi isitifiketi?
I-A1: Yonke imishini yethu inesitifiketi se-CE esiqinisekisa ikhwalithi nokuphepha. Imishini yethu ingaphansi kokuphathwa kwekhwalithi eqinile ukuqinisekisa ikhwalithi enhle. Ngoba sikuqonda ngokuphelele ukuthi kuzoba yinkinga enkulu uma umshini unenkinga ngenkathi usebenza phesheya kwezilwandle.
Q2. Kungani kufanele ukhethe thina?
I-A2: Ifektri enamandla, enikeza intengo yokuncintisana kanye nokusekelwa okungcono kobuchwepheshe ekuhlangenwe nakho kweminyaka engu-10 ekukhiqizeni umshini wobuhle, iwaranti eqinile ye-R & D 1 yeminyaka kanye ne-8/24 online yesevisi yokuthengisa ngemuva kokuthengisa i-CE Certification, ukhiye ongawusebenzisa ngokomthetho futhi uwuthengise umshini Ukwehluka kwensiza eyenziwe ngokwezifiso, amandla e-OEM aqinile ne-ODM atholakalayo.
Langaphambilini Umshini wokukhishwa we-Picosecond laser pigmentation
Olandelayo: Umshini osebenzayo we-picosecond laser tattoo pigment acne wokususa
Picosecond laser tattoo sombala ukususwa umshini ...
Picosecond ukuboniswa laser pigmentation ukususwa ...
Induna indawo ukususwa yezokwelapha CE ukwamukelwa picosecon ...
Uju lwezinyosi picosecond laser tattoo ukususwa machi ...